La cadeeyay! Fayraska cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' waxaa lagu dili karaa shucaaca 'ultraviolet rays' 30-ka. 99.9%
The coronavirus-ka cusub (COVID-19) waxaa si guul leh loogu dilay 30-meeyadii Seoul Viosys iyo SETi magaalada Seoul, Korea, oo ay dhawaan shaacisay Violeds SETi. Qorshaha daaweynta cudurka oof-wareenka ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' (tijaabada nooca 7) ayaa sidoo kale waxaa soo saaray Golaha Caafimaadka Qaranka waxayna tilmaameen in falaadhaha 'ultraviolet rays ...
La cadeeyay! Robotka disha jeermiska wadnaha ayaa hawlgalin kara koronavirus cusub
Fayraska cusub ee loo yaqaan 'coronavirus' ayaa ku baahay adduunka oo dhan, kaasoo khatar weyn ku ah badbaadada iyo caafimaadka dadka. Marka lagu daro jeermiska caadiga ah, ma jirtaa hab ka dhakhso badan oo wax ku ool ah oo lagu dilo coronavirus-ka cusub? Tikniyoolajiyadda jeermiska jeermiska lagu dilo ayaa la caddeeyay inay awood u leedahay inay disho MRSA ...
Cilmi baaristii ugu dambeysay: coronaviruska cusub waxaa laga yaabaa inuu ku sii noolaado wajiga maaskaro muddo 7 maalmood ah! Jeermiska maalinlaha ah ayaa muhiim ah
The coronavirus-ka cusub ayaa lagu daabacay lancet-ka by Stability of SARS-CoV-2 xaalado deegaan oo kala duwan dhawaanahan. Warqaddu waxay muujineysaa in waqtiga badbaadada ee coronavirus-ka cusub uu gaari karo ilaa 7 maalmood banaanka maaskaro, fayraskuna wuxuu ku deggan yahay qiimayaasha kala duwan ee pH heerkulka qolka ...